Addam ah Kitaabka Quduuska[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waa hore Ilaahay Yehowah ninkii iyo naagtii ugu horreeyay buu abuuray. Magacyadoodii waxay ahaayeen Aadan iyo Xaawa. Ilaahay wuxuu siiyay meel qurux badan ay ku noolaadaan oo la oran jiray beertii Ceeden. Haddii ay Aadan iyo Xaawa Ilaahay dhegeysan lahaayeen carruurtooda iyo iyaguba dunida oo dhan waxay ka dhigi lahaayeen janno sida beertaas. Oo weligood Janno bay ku noolaan kari lahaayeen. Aadan iyo Xaawa Ilaahay may dhegeysan sidaas daraaddeed janno maanta kuma noolin. Haddaba Ilaahay wuxuu yiri inuu dunida oo dhan qurxin doono. Oo ay dadka oo dhan weligood farxad ku noolaan doonaan.
↑ Abuuraha Binuʼaadanka Jannuu Siiyay
↑ Sir Qarsoon aan Rabno Inaan Ogaano
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebi_Aadam_C.S&oldid=217443"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Sebteembar 2021, marka ee eheed 11:21.